माधव नेपाल भेट्न किन पुगे प्रचण्ड कोटेश्वर ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
माधव नेपाल भेट्न किन पुगे प्रचण्ड कोटेश्वर ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल भेट्न नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका छन् । केहीबेर अगाडी मात्रै नेपाल निवास पुगेका प्रचण्ड र माधव नेपालका बीचमा अहिले छलफल जारी रहेको नेपालको नीजि सचिवालयले जनाएको छ । ’प्रचण्ड बिहान सवा ८ वजे कोटेश्वर आउनुभएको छ । अहिले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उहाँ (प्रचण्ड) का बीचमा छलफल भइृरहेको छ,’ नेपालको सचिवालयले भन्यो ।
नेपाललाई एमालेको ओली पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ । आज दिउँसो सम्मलाई समय राखेर सोधिएको स्पष्टीकरण पछि आजै दिउँसो ३ बजे बस्ने ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल सहित नेताहरुलाई कारवाहीको तयारी गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड नेपाल भेट्न नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका हुन् । भेटमा एमालेभित्रको अन्तरकलह, अबको माधव नेपालको राजनीतिक यात्रा र सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको हुन सक्ने नेपालको सचिवालयका एक सदस्यले सफलखबरलाई बताए ।
माधव नेपाल ओलीसँग नझुक्ने, ओली सच्चिन तयार रहे पूरानै अवस्थाबाट एकताको लागि अब पहलकदमी लिने तर ओली सच्चिनै तयार नभए र अझै पनि अहंमका रुपमा अगाडी बढन् खोजे नयाँ राजनीतिक कोर्स शुरु गर्ने रणनीतिमा छन् । नेपालले हिजो सोमबार मात्रै पनि आफु निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग आफ्नो दायाँ बायाँ हिड्नेहरुले साथ छोडेपनि आफु इमानको राजनीतिमा नडगमगाएको भन्दै निष्ठाको राजनीति सबैले गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
ओली पक्षले स्पष्टिकरण सोधेपछि देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसदहरुको नेपाल निवासमा छलफल भएको थियो । त्यही नेपालले झुकेर ओलीसँग आत्मसमर्पण आफुले नगर्ने प्रष्ट पारेका थिए । एक्लै भएपनि आफु उभिने बताएपछि नेता नेपाललाई साथ दिएका सांसदहरुले आउने दिनमा पनिसाथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
नेपाल समुहकै दोश्रो तहका नेताहरु भीम रावल, योगेश भटराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य लगायत नेताहरु भने ओलीको गुलियो प्रलोभनमा फसेर नेपालको साथ छोडन खोजिरहेका छन् । उनीहरुको मन ओलीतिरै ढल्किसकेपनि तैपनि नेपाललाई पनि एमालेभित्र लत्राउन सकिन्छ की भन्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन् । तर आफनो दोस्रो पुस्ताका नेताले आफुलाई धोका दिएको निश्कर्षमा नेपाल पुगिसकेका छन् । यो परिवेशमा प्रचण्ड र नेपालका बीचमा भएको भेटवार्ता अर्थपूर्ण मानिएको छ ।